सेनामा भर्ना हुन कस्तो शारीरिक परीक्षण गर्नुपर्दछ गठन र अध्ययन
सेनामा भर्ना हुन तपाईले कुन शारीरिक परीक्षण गर्नु पर्छ?
मारिया जोस रोल्डन | | विपक्षहरू
सशस्त्र बलमा पहुँच गर्दा, आवेदकहरु द्वारा एक धेरै डरलाग्दो परीक्षण शारीरिक हो। जहाँसम्म, राम्रो तयारी र एक सकारात्मक मानसिकता संग, तपाईं तिनीहरूमा पार गर्न सक्षम हुन धेरै धेरै समस्याहरू हुनु हुँदैन। यी शारीरिक परीक्षण चयन प्रक्रियाको दोस्रो चरणको दौरान गरिन्छ।
तसर्थ, तिनीहरूलाई लिनु अघि, बिभिन्न आवेदकहरू पारित हुनुपर्दछ सैद्धांतिक भाग र प्रतियोगिताको भाग जसमा उनीहरूले बिभिन्न शैक्षिक योग्यताहरू प्रमाणित गर्नुपर्दछ। अर्को लेखमा हामी तपाईसँग त्यस्ता शारीरिक परीक्षणहरू र कसरी उनीहरूलाई सशस्त्र सेनाको हिस्सा बन्नको लागि पराजित गर्ने बारेमा अझ विस्तारपूर्वक कुरा गर्नेछौं।
1 सेनामा प्रवेश गर्न शारीरिक परीक्षण
1.1 पहिलो शारीरिक परीक्षण
1.2 दोस्रो शारीरिक परीक्षण
1.3 तेस्रो शारीरिक परीक्षण
1.4 चौथो शारीरिक परीक्षण
सेनामा प्रवेश गर्न शारीरिक परीक्षण
त्यस्ता परीक्षणहरू सुरू गर्नु अघि, विभिन्न आवेदकहरूले सम्बन्धित मेडिकल जाँच पास गर्नु पर्छ। एक पटक मान्यता पारित भएपछि, विभिन्न आवेदकहरूले चार शारीरिक परीक्षण लिनु पर्छ।
पहिलो शारीरिक परीक्षण
पहिलो परीक्षणमा रनको बिना लामो जम्प समावेश हुन्छ। यसले तपाईंको खुट्टा टेक अफ लाइन पछाडि जत्ति धेरै जम्पिing समावेश गर्दछ। मिटरहरूमा निर्भर गर्दै, ब्रान्डको स्तर A बाट स्तर डीमा मूल्य हुन्छ पहिलो स्तर कम मागको हुन्छ, जबकि डी सबैभन्दा जटिल हुन्छ। त्यसो भए हामी तपाईंलाई न्यूनतम अंकहरू देखाउनेछौं जुन यो परीक्षा पास गर्न आवश्यक छ:
स्तर ए सीटहरू पुरुषमा १ 145 सेन्टीमिटर र महिलाको सन्दर्भमा १२१ सेन्टीमिटर छन्।
स्तर बी सीटहरू पुरुषहरूको लागि १163 सेन्टीमिटर र महिलाका लागि १136 सेन्टीमिटर छन्।
स्तर सी वर्ग पुरुषहरूको लागि १187 सेन्टीमिटर र महिलाको लागि १156 सेन्टीमिटर छ।
स्तर डी सीटहरु २० 205 सेन्टिमिटर पुरूषको मामला मा छन् र महिलाको लागि १171१।
दोस्रो शारीरिक परीक्षण
दोस्रो शारीरिक परीक्षणले एक मिनेटको समयमा धेरै सिट-अपहरू समावेश गर्दछ। व्यक्ति खुट्टाको साथ झुकावमा सुत्नु पर्छ र निर्धारित समयमा धेरै संख्यामा सिट-अपहरू गर्ने प्रयास गर्नुपर्दछ:
स्तर A वर्गहरू पुरुषहरूको लागि १ sit सिट-अपहरू र महिलाहरूका लागि १० सिट-अपहरू हुन्।
स्तर बी सीटहरु पुरुषहरु को लागी २१ र महिला को लागी १ sit सिट-अप छन्।
स्तर सी वर्ग पुरुषहरूको लागि २ sit सिट-अपहरू र महिलाहरूका लागि २२ सिट-अपहरू हुन्।
स्तर डी स्थानहरू पुरुषहरूको लागि and 33 र महिलाको लागि २ are हो।
तेस्रो शारीरिक परीक्षण
तेस्रो शारीरिक परीक्षणले धेरै संख्यामा पुश-अप गर्दछ। व्यक्तिले ट्रunk्क र खुट्टाहरू सिधा लाइन बनाउने हात हतियार संग खडा हुनु पर्छ। त्यहाँबाट हतियार फ्याक्लिनु पर्छ र चिनो जमीन स्तरमा नभएसम्म विस्तार गर्नुपर्दछ:
स्तर ए स्थानहरू पुरुषहरूका लागि push पुश-अपहरू र महिलाहरूका लागि push पुश-अपहरू हुन्।
स्तर बी स्थानहरू पुरुषहरूका लागि push पुश-अपहरू र महिलाहरूका लागि push पुश-अपहरू हुन्।
स्तर सी वर्ग पुरुषहरु को लागी १० पुश-अप र महिलाहरुका लागि push पुश-अप हुन्।
स्तर डी वर्ग पुरुषहरु को लागी १ push पुश-अप र महिलाहरुका लागि push पुश-अप हुन्।
चौथो शारीरिक परीक्षण
चौथो परीक्षामा २० मिटर पछाडि र अगाडि प्रगतिशील दौडहरू समावेश हुन्छ। यो परीक्षणले आवेदकको प्रतिरोध मापन गर्न कोशिस गर्दछ। व्यक्तिले २० मिटरको दुरी बारम्बार यात्रा गर्नुपर्दछ र दर पछ्याउँदै जुन क्रमिक रूपमा बढ्दैछ। तपाईंले बिप ध्वनिहरू अघि सेट बिन्दुमा पुग्नुपर्नेछ र बीपको आवाज फेरि सुरु हुनु अघि शुरुवात बिन्दुमा फर्कनु पर्छ। न्यूनतम मार्कहरू जुन आवेदकहरूले स्थापना गर्नुपर्दछ निम्न छन्:
तह A ठाउँहरू: पुरुषमा ces दौड र women. women महिला दौडहरू
स्तर बी स्थानहरू: पुरुषहरूको लागि .5,5.ces दौड र महिलाहरूको लागि ces दौड
स्तर सी स्थानहरू: पुरुषको मामलामा .6,5..5 दौड र महिलाको सन्दर्भमा ra दौड
स्तर डी स्थानहरू: पुरुषहरूको लागि .7,5.ces दौड र महिलाका लागि ces दौड
यी चार शारीरिक परीक्षणहरू जुन सबै व्यक्तिहरू सेनामा भर्ना हुन चाहन्छन् पास गर्न आवश्यक छ। यी परीक्षणहरू हुन् जुन अति जटिल छैनन्, जबसम्म विभिन्न आवेदकहरू तयार छन्।
कुनै पनि समस्याबिना त्यस्ता परीक्षणहरू पार गर्न, यो सम्भव भएसम्म स्वस्थ आहार लिन सल्लाह दिइन्छ सहि तरीकामा व्यायाम गर्नुहोस्। शारीरिक परीक्षण पास गर्दा पर्याप्त आराम पनि आवश्यक छ। दृढता, प्रयास र लगनशीलताका साथ तपाईं सशस्त्र सेनामा सामेल हुन सक्नुहुनेछ र आफ्नो देशको सेवा गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: गठन र अध्ययन » विपक्षहरू » सेनामा भर्ना हुन तपाईले कुन शारीरिक परीक्षण गर्नु पर्छ?
तपाईले कसरी थाहा पाउनुहुन्छ जब छात्रवृत्ति आउँछ?
Career सुझावहरू क्यारियर अवसरहरू खोज्नका लागि